Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika?
Unoona sekuti pane zvichazopedzisira zvaita kuti urukutike here? Kana zvakadaro, nyaya ino ichakubatsira!
Kuwandirwa nezvokuita. Mumwe musikana anonzi Julie anoti, “Pazvese zvatinoita, vanhu vanotikurudzira kuvandudza upenyu hwedu neunhu hwedu, kuva nezvinangwa zvekuva neupenyu hwepamusoro uye kuzadzisa zvinangwa izvozvo. Kuramba uchingoudzwa mashoko akadai kunoita kuti unetseke!”
Kugadzirwa kwezvinhu. Iye zvino kwava nemafoni, matablets, nezvimwewo uye vanhu vanogara vari paindaneti, uye izvi zvinotinetesa, topedzisira tarukutika.
Kusarara. “Kuti vechidiki vawane nguva yekuenda kuchikoro, kubasa uye yekutandara, vanopedzisira vava kukurumidza kumuka, uye kunonoka kurara, uye izvi zvinogona kuramba zvichiitika zvekuti zvinozovakanganisa,” anodaro musikana anonzi Miranda. Izvi zvinoita kuti vazopedzisira varukutika.
Bhaibheri rinokurudzira vanhu kuti vashande nesimba. (Zvirevo 6:6-8; VaRoma 12:11) Asi harikurudziri vanhu kuti vashande kusvika pakushaya nguva yekuita zvimwewo zvinhu muupenyu, zvakadai sekuchengetedza utano hwavo.
“Rimwe zuva ndakazoona kuti ndakanga ndatoswera ndisina kumbodya chimwe chinhu nekuda kwekuwandirwa nezvekuita. Ndakazoona kuti hazvina kunaka kungobvuma mabasa ese zvekuti unobva washaya nguva yekuita zvinhu zvinoita kuti uchengetedze utano hwako.”—Ashley.
Ndokusaka Bhaibheri richiti: “Imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa.” (Muparidzi 9:4) Kana ukazvimanikidza kuita zvimwe zvinhu, ungafunga kuti une simba rakaita sereshumba asi hauna kwaunosvika. Kushanda nesimba kusvika warukutika kunogona kukanganisa utano hwako.
Dzidza kuramba zvimwe zvinhu. Bhaibheri rinoti, “Vane mwero ndivo vane uchenjeri.” (Zvirevo 11:2) Vanhu vane mwero havabvumi zvinhu zvakawanda kupfuura zvavanokwanisa.
“Chinhu chikuru chinoita kuti munhu azopedzisira arukutika kutadza kuramba zvimwe zvinhu, uye munhu akadaro anongobvuma mabasa ese anenge auya. Uku kutadza kuva nemwero. Munhu akadaro anopedzisira arukutika.”—Jordan.
Wana nguva yakakwana yekuzorora. Bhaibheri rinoti: “Zviri nani kuzorora zvishoma pane kushanda zvakaoma zvakapetwa kaviri asi uchidzingana nemhepo.” (Muparidzi 4:6) Vamwe vanototi kurara “kudya kwepfungwa,” asi vechidiki vakawanda havasi kurara maawa 8 kusvika ku10 usiku hwega hwega sezvo achinzi ndiwo anoita kuti vave neutano hwakanaka.
“Pandainge ndiine zvakawanda zvekuita, ndaiwanzononoka kurara. Asi kusarara kunotoita kuti nditadze kuita nemazvo zvandinenge ndichida kuita zuva rinotevera uye ndinobva ndashaya mufaro.”—Brooklyn.
Iva munhu akarongeka. Bhaibheri rinoti: “Zvirongwa zvomunhu anoshingaira [zvinobudirira].” (Zvirevo 21:5) Kana ukadzidza kushandisa nguva yako zvakanaka zvichakubatsira kweupenyu hwako hwese.
“Kugara waronga zvaunoda kuzoita kunogona kuita kuti usazonyanya kunetseka. Kana ukagara uine purogiramu, zvichakuitira nyore kuti uone paunogona kuchinja kuti usazopedzisira warukutika.”—Vanessa.
“Vamwe vanhu vanorukutika nekuti vanenge vachiedza kutsvaga mari yakawanda. Asi 1 Timoti 6:8 inotiudza kuti tigutsikane nezvinhu zvinokosha zvatinoda kuti tirarame. Izvi zvinongotiyeuchidza kuti tishande kuitira kuti tiwane zvatinoda pakurarama kwete kushanda nesimba kuti tiwane zvinhu zvisingakoshi.”—Gianna.
“Kugadzira purogiramu yezvandichaita vhiki rese kunondibatsira chaizvo. Ndisati ndatanga kuita izvi, ndaibvuma kuita zvinhu zvakawanda kupfuura zvandaikwanisa. Saka zvaizoita kuti ndinetseke uye ndaisapedza zvandainge ndabvuma kuti ndaizoita.”—Waylon.
“Unogona kufunga kuti ndinofanira kubvuma kuenda kwese kwandinenge ndakokwa uye ndikasaenda handizofari. Asi ndakazoona kuti izvozvo handizvo. Unotonyanya kufara uye kunzwa wakadekara kana ukazvipa nguva yekumbozorora hako uri wega.”—Kara.
Mazano 5 anogona kukubatsira kuti ukurire kuzvidya mwoyo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika?
ijwyp nyaya 74